तपाईलाई साहस उर्जाको आइपीओ पर्यो ? कतिमा होला पहिलो कारोवार ? – Insurance Khabar
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १३:३०
काठमाडौं । साहस उर्जाको आइपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । साहस उर्जाको पहिलो शेयर कारोबारका लागि न्युनतम प्रतिकित्ता १३५ रुपैयाँ ११ पैसा र अधिकतम ४०५ रुपैयाँ ३३ पैसा सम्म रेञ्ज पाउने सम्भावना छ । पहिलो कारोवारको लागि कम्पनीले किताबी मूल्य देखि किताबी मूल्यको तीन गुणासम्म रेञ्ज पाउने गर्छन । कम्पनीको आर्थिक वर्ष ७६/७७ को वास्तविक नेट्वर्थको आधारमा रेञ्ज पाउने सम्भावना छ ।
स्पेसल प्री ओपनिङ सेसनमा सो रेञ्ज भित्र कारोवार हुनुपर्छ। त्यस पछि मात्र कम्पनीको नियमित समयमा शेयर कारोवार सुरु हुन्छ।
आईपीओ बाँडफाँडमा ६ लाख ४४ हजारले १०/१० कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारण समुहको ७० करोड रुपैयाँ मध्ये २ लाख १० हजार कित्ता कर्मचारी र ३ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानीकोषहरुले प्राप्त गरेका छन् ।
कर्मचारी र सामुहिक लगानीकोषलाई बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको ६४ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणहरुलाई बाँडफाँड गरिएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म सार्वजनिक निष्काशन गरेको थियो ।